kid – စာမကျြနှာ7– Healthy Life Journal
အပြင်စာ ကြိုက်တဲ့ ကလေးတွေ . . .
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) “ သား . . ခေါက်ဆွဲကြော်စားချင်တယ်မေမေ” အစားကြေးများတဲ့ သားငယ်က ညနေစာ ထမင်း မစားချင်ဘူး၊ ခေါက်ဆွဲကြော်စားမယ်လို့ ဂျီကျ တောင်းဆိုလာတော့ ဒေါ်ဝေေ၀မနေနိုင်။ “ အဲဒါဆို သားအတွက် မေမေ...
ကလေးများ၏ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုက မိခင်ဆီမှ အမွေရရှိ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ကလေးတွေရဲ့ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုက မိခင်ဆီက အမွေဆက်ခံတယ်လို့ သုတေသီတွေက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ Xခရိုမိုဆုမ်း ၂ခုရှိပြီး အမျိုးသားတွေမှာ တစ်ခုသာရှိတာကြောင့် ကလေးတွေဟာ မိခင်တွေဆီမှ ဥာဏ်ရည်မျိုးဗီဇတွေ ပိုမိုရရှိဖို့ အလားအလာများကြောင်း သိရပါတယ်။ဖခင်ဆီက အမွေရရှိတဲ့ ဥာဏ်ရည်မျိုးဗီဇတွေဟာ အလိုအလျောက်...
သင့်အိမ်မှာ ကလေးငယ်အတွက် လုံခြုံနွေးထွေးတဲ့ ကစားရာနေရာလေး ဖန်တီးပေးရအောင်
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ကလေးတွေ ကစားနေတာက သူတို့ရဲ့ လေ့လာစူးစမ်းစိတ်ကို အသုံးချနေတာပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးက ဆော့လိုက်တာဆိုပြီး မငြိုငြင်ပါနဲ့။ ကလေး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှာကို မိဘတိုင်း စိုးရိမ်ပူပန်တတ် ကြတာမို့ ကလေးကစားခုန်စား ပြုလုပ်ရာမှာ အန္တရာယ်ကင်းပြီး ချစ်ချင် နှစ်သက်ဖွယ်ရာ...
မွေးကတည်းက ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးထားရင် . . .
မေး။ ။ သားလေးကို မွေးကတည်းက ဘီပိုးကာကွယ် ဆေးထိုးထားပါတယ်။ အခု သားလေး ငါးနှစ်ပြည့်ပြီ ဆိုတော့ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးကို ထပ်မံထိုးနှံဖို့လို အပ်ပါသေးသလားရှင့်။ မ၀ါဝါ၊ ဘုရင့်နောင်။ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွှန့် ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ပဋိပစ္စည်းပမာဏဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ...
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ၊အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး။ ။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးသန်စွမ်းအောင် မိဘတွေက ကိုယ့်ကလေးတွေကို ဘယ်လို စောင့်ရှောက်ပေးသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ။ ။ အဓိကကတော့ ကလေးတစ်ယောက် ကြီးထွားဖွံ့ ဖြိုးသန်စွမ်းဖို့ မိခင်လောင်းဘ၀ကတည်းက စပြီး...
သင့်ကလေးမှာ လက်မစုပ်တဲ့ အကျင့်ရှိနေသလား
၊ လရိပ်မေ ၊ ကလေးငယ်တွေမှာ လက်မစုပ်တဲ့ အကျင့်ကို အတွေ့ရများပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ လက်မနဲ့ လက်ချောင်းတွေကို စုပ်တာက ဖျောက်ရခက်တဲ့ အလေ့အထတစ်ရပ်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မိဘတွေအနေနဲ့ က လေးတွေ လက်မစုပ်တာကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကလေးရဲ့...
ကလေးတွေ ဂိမ်းကစားတာများရင် . . .
မေး. အခုခေတ်ကလေးတွေက ဂိမ်းတွေ ကစားတာများပါတယ်။ အဲဒါကို မိဘတွေအနေနဲ့ ဘယ်လို ထိန်းကျောင်းပေးသင့်ပါသလဲ။ မနီလာ၊ မန္တလေး။ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ၊ အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အခုခေတ်စကားနဲ့ ပြောရရင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်မှာ မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေက...